Ny mailaka sy ny entana Outlook dia voafafan'i Mistake. Esory ireo mailaka Outlook.
Home Products DataNumen Outlook Repair Diso voafafa ny mailaka Outlook sy ny entana hafa.
Fafao ireo zavatra Outlook amin'ny hadisoana? DataNumen Outlook Repair afaka mamaha azy ireo!
Fafao ny mailaka sy ny zavatra hita amin'ny Outlook:
Rehefa mamafa mailaka na zavatra hafa ao amin'ny Outlook ianao, amin'ny fipihana ny bokotra "Del", dia hafindra mankany amin'ny "Vokatra voafafa”Fampirimana. Azonao atao ny mamerina azy io amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ny "Vokatra voafafa”Fampirimana, mahita ny mailaka tadiavinao, ary mamerina azy amin'ny toerany tany am-boalohany na lahatahiry mahazatra hafa.
Na izany aza, raha esorinao amin'ny "Ctrl-Del" ilay entana, na esorinao amin'ilay "Vokatra voafafa”Fampirimana, avy eo nesorina tao amin'ny Outlook mandrakizay ilay entana. Ny fomba tokana ahazoana azy io dia ny fampiasana ny vokatray DataNumen Outlook Repair, izay afaka mamaha ny olana toy ny rivotra, toy izao:
Safidio ny rakitra Outlook PST izay hamafana maharitra ny singa sasany ho rakitra PST loharano azo amboarina.
Amboary ny rakitra Outlook PST loharano. DataNumen Outlook Repair dia hanao scan sy hanafoana ireo entana voafafa.
Aorian'ny fizotry ny fanamboarana dia azonao atao ny mampiasa ny Outlook hanokatra ny rakitra PST raikitra ary hahita ireo entana voafafa rehetra dia naverina amin'ny toerana izay voafafa mandrakizay. Ohatra, raha mampiasa ny bokotra "Ctrl-Del" ianao hamafana mandrakizay ny mailaka amin'ny "Inbox”Fampirimana, avy eo DataNumen Outlook Repair hamerina azy io amin'ny "Inbox”Fampirimana aorian'ny fizotran'ny fanarenana. Raha mampiasa ny bokotra "Del" ianao hamafana ity mailaka ity amin'ny "Inbox”Fampirimana, ary avy eo hamafa azy io hatrany amin'ny“Vokatra voafafa”Fampirimana, avy eo aorian'ny fanarenana, haverina amin'ny laoniny ho“Vokatra voafafa”Folder.
Raha tsy hitanao ireo entana any amin'ireo toerana nofafanaina mandrakizay, dia azonao atao ny manandrana mahita azy ireo miaraka amin'ireto fomba manaraka ireto:
1.1 Tadiavo ao amin'ny lahatahiry "Recovered_Groupxxx". Ireo entana voafafa dia azo raisina ho lost & entana hita, izay haverina ary apetraka amin'ny lahatahiry antsoina hoe "Recovered_Groupxxx" ao amin'ny fisie PST raikitra.
1.2 Raha fantatrao ny toetoetran'ny entana tadiavina, ohatra, ny lohahevitry ny mailaka, ny teny lakile sasany ao amin'ny vatan'ny mailaka, sns., Dia azonao atao ny mandray ireo fananana ireo ho mpitsikera ny fikarohana ary mampiasa ny asan'ny fikarohana Outlook hikarohana ireo entana tadiavina ao amin'ilay fisie PST raikitra rehetra. Indraindray, ireo entana voafafa dia mety ho azo averina ary ampidirina amina lahatahiry hafa na lahatahiry arbitrary anarana. Afaka mahita azy ireo mora foana ianao miaraka amin'ny lahasa fikarohana an'ny Outlook.
Azonao atao ny mahatsikaritra ireo zavatra tsy voafafa ao amin'ny lahatahiry "Recovered_Groupxxx". Aza miraharaha azy ireo fotsiny azafady. Satria rehefa mamafa ny singa iray i Outlook, dia hanao kopia mitovy dika mitovy aminy. DataNumen Outlook Repair dia mahery vaika ka afaka mamerina ireo dika mitovy ireo ary mandray azy ireo toy ny lost & entana hita, izay haverina ary apetraka amin'ny lahatahiry antsoina hoe "Recovered_Groupxxx" ao amin'ny fisie PST raikitra.
Ohatra ny fisie PST izay voafafa mandrakizay ny mailaka misy ny lohahevitra "Tongasoa eto amin'ny Microsoft Office Outlook 2003". Outlook_del.pst
Ny rakitra sitrana tamin'i DataNumen Outlook Repair, izay averina amin'ny toerany ilay mailaka voafafa “Inbox”Folder Outlook_del_fixed.pst